[Review] Top 6 loại kem chống nắng phổ rộng cho da tốt nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review] Top 6 loại kem chống nắng phổ rộng cho da tốt nhất | Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 loại kem chống nắng phổ rộng cho da tốt nhất | Muasalebang in Muasalebang
Impela uma ungumuntu osanda kuzalwa ukuvikela ilanga khona-ke kungase kuzwakale kuxakile ukuthi abantu bavame ukutusa ukukhetha umkhiqizo I-anti-spectrum sunscreen ebanzi. Ngakho-ke manje njengoba uqonda ukuthi yiziphi i-spectrum spectrum sunscreens, kungani kufanele uzisebenzise? Iyiphi i-spectrum ebanzi yokuvikela ilanga okufanele ngiyikhethe? Sicela ubhekisele esihlokweni mayelana Izikhilimu zelanga eziphezulu ezingu-6 ezihamba phambili zesikhumba namuhla.
1 Iyini i-spectrum ebanzi yokuvikela ilanga?
2 Kungani kufanele usebenzise i-spectrum ebanzi yokuvikela ilanga?
3 Ungasihlonza kanjani isikhilimu selanga esilungile se-spectrum esibanzi
4 Izikhilimu zelanga eziphezulu ezingu-6 ezihamba phambili zesikhumba namuhla
4.1 3.1 I-Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50
4.2 3.2 I-EltaMD UV Clear Broad Spectrum Sunscreen SPF 46
4.3 3.3 I-EltaMD UV Spray Broad Spectrum SPF 46 Isikrini selanga
4.4 3.4 I-MartiDerm The Originals Proteus Screen Sunscreen SPF 50+
4.5 3.5 La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch Gel-Cream Sunscreen SPF 50+
4.6 3.6 Cancer Council Active Broad Spectrum Sunscreen SPF 50+/PA+++++ 110ml
Iyini i-spectrum ebanzi yokuvikela ilanga?
Iqiniso, I-anti-spectrum sunscreen ebanzi Okusho ukuthi, umugqa wemikhiqizo yokuvikela ilanga ekwazi ukuvikela isikhumba emiphumeleni yomibili imisebe ye-UVB ne-UVA.
Ngokuvamile, i-SPF isidume kakhulu kangangokuthi ikhombisa ikhono lomkhiqizo lokuvimba imisebe ye-UVB. Esikhundleni salokho, umbhalo ongaphandle kwephakheji yomkhiqizo we-Broad-Spectrum uzomela umugqa obanzi we-spectrum wokuvikela ilanga.
Kungani kufanele usebenzise i-spectrum ebanzi yokuvikela ilanga?
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, ukusetshenziswa I-anti-spectrum sunscreen ebanzi Kuzosiza ukuvikela isikhumba ngokuphelele emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-UVB ne-UVB. Ngaphandle kwalokho, kusiza isikhumba ukuvimbela izimpawu zokuguga ezingcono.
I-Broad spectrum sunscreen ivikela isikhumba ngokugcwele
Imvamisa, yomibili imisebe ye-UVA ne-UVB yenza isikhumba sithonyeke kalula ezinkingeni ezimbalwa njengokuguga ngaphambi kwesikhathi, ama-freckles kanye nemibimbi noma ukwakheka kwamabala ansundu. Akukhona lokho kuphela, ukuchayeka kakhulu emisebeni kuzodala ukuthi isikhumba sithinteke. Ngesikhathi esifanayo kungaholela kwezinye izifo ze-dermatological, ngisho nomdlavuza wesikhumba.
Lapho usebenzisa I-anti-spectrum sunscreen ebanzi Bazosiza isikhumba sakho ekuvimbeleni kangcono imisebe eyingozi elangeni.
I-Broad spectrum sunscreen ivikela isikhumba ngempumelelo kakhulu
Ngaphezu kokuvimbela imiphumela yayo yomibili imisebe, imithi yokuvikela ilanga ebanzi futhi isiza ukuvikela isikhumba ngokuphumelelayo.
Isb i-sunscreen ngokomzimba ngokuvamile zidlula ngokushesha, futhi i-sunscreen yamakhemikhali yenza esinye isikhumba sibebomvu, noma sizwele. Kodwa imigqa yokuvikela ilanga ene-spectrum ehlanganisiwe ebanzi ngokuvamile iqukethe izithako ezingenabungozi, ezingenambala, ezingenaphunga nezingenayo iphunga. Ngakho-ke, bangakhawulela ezinye zezinkinga ezilethwa ama-sunscreens avamile.
I-Broad spectrum sunscreen ngokuvamile idala isisekelo esihle
Lesi sici sifaneleka kakhulu kumantombazane athanda izimonyo. Ngoba ngeke bageze izimonyo. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ubuye ungene ngokushesha esikhumbeni, ngaphandle kokushiya isikhumba sinamafutha.
Ngakho ngongqimba oluncane lwe-sunscreen, ungasivikela ngokugcwele isikhumba sakho. Ngesikhathi esifanayo, engeza izimonyo kancane futhi ungakwazi ngokuzethemba wehla ngomgwaqo.
>>>Inkomba: Izikhilimu zelanga ezingcono kakhulu ezingu-6 nezidume kakhulu ezingaphakamisi ithoni
Ungasihlonza kanjani isikhilimu selanga esilungile se-spectrum esibanzi
Ukuhlonza umkhiqizo we-sunscreen I-anti-spectrum sunscreen ebanzi Uma kungenjalo, izinombolo ze-SPF ne-PA emaphaketheni ziyizimpawu okufanele uzinake. I-SPF iyinkomba yokumelana nemisebe ye-UV (imvamisa imisebe ye-UVB) futhi isukela ku-15 kuye ku-100. Uma isibalo se-SPF siphezulu, kuba ngcono ikhono lokuvimba imisebe ye-UV nokuvikela isikhumba.
Inkomba ye-PA ikhombisa amandla okuhlunga imisebe ye-UVA, uma i-PA iphezulu, umphumela uba ngcono wokuvikela isikhumba. Eqinisweni, izinkomba zizoshintsha kuye ngesimo ngasinye semvelo esifana nokukhanya kwelanga, isimo sezulu, umjuluko noma inani le-sunscreen esetshenziswa esikhumbeni…
Imikhiqizo yokuvikela ilanga ene-SPF engaphezu kuka-30 futhi enenkomba ye-PA izolinganiswa njengokuvikela ilanga okubanzi. Noma ephaketheni elinamagama athi “Broad Spectrum”, noma “Full Spectrum” noma “UVA protect” futhi kuwuphawu lokuthi ukwazi ukubona isikrini selanga esibanzi kakhulu.
Izikhilimu zelanga eziphezulu ezingu-6 ezihamba phambili zesikhumba namuhla
Sebenzisa I-anti-spectrum sunscreen ebanzi izothuthukisa umphumela wokuvikela isikhumba uphelele kakhulu. Ngakho-ke uma ungakhethanga isikrini selanga esifanelekayo esibanzi, ungabhekisela kokungu-6 okuphezulu ngezansi:
3.1 I-Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50
Owokuqala ohlwini lwezivikeli zelanga ezibanzi kakhulu yi-Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum sunscreen evela kumkhiqizo we-Obagi. Lona umkhiqizo ovela kumkhiqizo we-Obagi, odume ngemigqa yawo yekhwalithi ephezulu futhi ephezulu yokulwa nokuguga. Lo mugqa obanzi wokuvikela ilanga uphinde ucwaningwe njengesixazululo senkinga yokuvikela isikhumba okuphelele, ukuvimbela imiphumela eyingozi yemisebe ye-UV kanye nokunciphisa inqubo yokuguga.
Njengamanje, i-Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 isikrini selanga sinezinguqulo ezimbili. Kufaka inguqulo evamile kanye nenguqulo ye-Matte Premium. Ngaphezu kwalokho, zombili izinguqulo zifanele zonke izinhlobo zesikhumba, azinawo amakha noma ama-parabens. Ngakho-ke, zifanelekile esikhumbeni esibucayi kakhulu.
Ikakhulukazi, ngefomula elincanyana nelikhanyayo, Obagi sunscreen Lokhu kungena kalula esikhumbeni. Ngaphezu kwalokho, iphinde yakha isisekelo esincane, esilula esinganamatheli noma esinamafutha esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 1,200,000 VND/ 85g.
3.2 I-EltaMD UV Clear Broad Spectrum Sunscreen SPF 46
I-EltaMD UV Clear Broad-Spectrum Sunscreen iyisici sokuvikela ilanga esibanzi sokwelashwa kwesikhumba esikwazi ukuvikela isikhumba emiphumeleni yemisebe ye-UVB ne-UVA. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo usiza ukukhanyisa ngisho nethoni yesikhumba. Ngaphezu kwalokho, iphinde inciphise amabala ansundu enikeza isikhumba ukukhanya okukhanyayo.
I-sunscreen ye-EltaMD yaziswa kakhulu, ifanele labo abanesikhumba esihlangene samafutha, isikhumba esinamafutha esinezinduna bangasebenzisa. Ikakhulukazi, I-anti-spectrum sunscreen ebanzi Le fomula ihlanganisa inkimbinkimbi engu-9.0% ye-Zinc Oxide, i-Octinoxate 7.5% yokuvikela ilanga. Ngenxa yalokho, izithako ezisebenzayo zingavimba kokubili amaza amaza amafushane namade amaza e-UVB kanye nemisebe ye-UVA.
Akugcini lapho, umkhiqizo uqukethe no-5% wevithamini B3 (niacinamide). Ngakho-ke, isikhumba sakho siphinde sisekelwe ukuze sibe mhlophe futhi silawule i-sebum. Ngesikhathi esifanayo, ukuvuselela ubuso besikhumba nokunciphisa ukubomvu, ukugcoba ngokuphumelelayo. Ikakhulukazi, umkhiqizo uqukethe i-Vitamin E, esiza ukugcina umswakama kahle esikhumbeni futhi iyi-anti-oxidant enhle esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 830,000 VND/ 48g.
>>> Bona okwengeziwe: I-Tone Up 10 Best Oily Acne Sunscreens
3.3 I-EltaMD UV Spray Broad Spectrum SPF 46 Isikrini selanga
Okukodwa kwe ama-sunscreens abanzi Idume kubantu abaningi, i-EltaMD UV Spray Broad Spectrum SPF 46 iyisifutho selanga esihlala isikhathi eside. Lo mkhiqizo onezithako ezisebenzayo usiza ukulwa ngokuphumelelayo nemisebe ye-UVB ne-UVA.
Ngaphandle kwalokho, i-Eltamd UV Spray Broad Spectrum sunscreen ilungele zonke izinhlobo zesikhumba. Ngesikhathi esifanayo, ne-SPF 46 yokuvikela ilanga, ifaneleka kakhulu ukuhamba, ukubhukuda, nokupikiniki. Ngisho nalabo kini abavame ukusebenza elangeni.
Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uqukethe izithako ezivelele ezifana ne-Zinc Oxide, i-Octinoxate. Ngaleyo ndlela, esiza ukuvikela emiphumeleni yomibili imisebe ye-UVA ne-UVB. Ikakhulukazi, ukunciphisa ukushiswa yilanga, ukunciphisa ukuguga ngaphambi kwesikhathi kwesikhumba.
Intengo yesithenjwa: 950,000 VND / 113g.
3.4 I-MartiDerm The Originals Proteus Screen Sunscreen SPF 50+
Qaphela ukuthi i-MartiDerm I-Original Proteus Screen SPF50+ Fluid Cream iwumkhiqizo oguquguqukayo, osebenziseka kalula futhi ojabulisa ngobuhle. Ngaphandle kwalokho, umkhiqizo uvikela ngokumelene ne-UVA / UVB sibonga isithako Se-Sunscreens Encapsulated. Ngaleso sikhathi, ama-Sunscreens ahlanganisiwe ayizihlungi ze-UV ezinobuchwepheshe be-encapsulation okuthuthukisa kakhulu ukuzinza kwamakhemikhali e-sunscreen asebenzayo izithako, kuyilapho kuvimbela ukungena okujulile ku-stratum corneum yesikhumba. Ngaleyo ndlela, kuthuthukisa ukuphepha kanye nokunciphisa izinkinga zokucasuka kwesikhumba.
Ngaphezu kwalokho, ikhono lokumelana nemisebe ye-infrared (IR – Infrared Radiation) ngenxa ye-provitamin A. Ikhono lokumelana nokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka (HEV – High Energy Visible Light) sibonga ukukhishwa kwe-cocoa & ne-provitamin A. Ngesikhathi esifanayo, Iphinde yondle isikhumba ukuze sibe nobusha, obuswakeme futhi ngisho nethoni ene-Proteoglycans ne-Hyaluronic Acid & Silicon Complex.
Ikakhulukazi, le nkimbinkimbi iboniswe ukuthi ikhuthaze ukwanda kwama-keratinocyte kuze kufike ku-63% (ngaphansi kwezimo zokuhlolwa kwe-in vitro). Ngakho-ke, kusiza ukusekela inqubo yokuvuselelwa kwesikhumba kusuka ku-dermis nokubuyisela umsebenzi wokuvimbela isikhumba. Ngaphezu kwalokho, ukuthungwa kuyinto I-sunscreen ye-Martidem I-Ultra-fine cream-to-powder liquid, imuncwa ngokushesha esikhumbeni ngemva kokufakwa. Uzothola ukuthi ishiya isikhumba esithambile, silky futhi engasindi “njengento engekho” esikhumbeni.
Intengo yesithenjwa: 1,350,000 VND 40ml.
3.5 La Roche-Posay Anthelios XL Dry Touch Gel-Cream Sunscreen SPF 50+
Uma uzibuza ukuthi yimuphi umkhiqizo ongakhetha kuwo ukwelashwa kwesikhumba sakho ama-sunscreens abanzi bese i-Anthelios XL Dry Touch Gel-Cream SPF 50+ UVB & UVA iyisiphakamiso esihle. Lona umkhiqizo womkhiqizo wezimonyo othandwa umhlaba wonke ngaphansi kweqembu elidumile laseFrance i-L’oreal.
Izithako zalesi sikrini sokuvikela ilanga esibanzi zifaka i-Mexoryl SX, i-Mexoryl XL ne-Tinosorb S ehlanganiswe ne-Titanium Dioxide, i-rhododendron root extract kanye namanzi amaminerali e-La Roche Posay. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo unokwakheka kwe-gel-cream engena ngokushesha esikhumbeni ngaphandle kokushiya uhlaka olumhlophe.
Siyabonga ngokuba nohlu lwezithako ezinempilo, I-sunscreen yaseLa Roche Posay Ayibangeli induna. Ngaphezu kwalokho, inomphumela omuhle kakhulu wokulawula umjuluko nowoyela. Ikakhulukazi ukuvikelwa elangeni elilungile.
Intengo yesithenjwa: 429,000 VND/ 50ml.
3.6 Cancer Council Active Broad Spectrum Sunscreen SPF 50+/PA+++++ 110ml
Futhi umkhiqizo I-spectrum ebanzi yokuvikela ilanga yokwelapha isikhumba ethandwa abantu abaningi iCancer Council Active SPF 50+/ PA ++++. Lo mkhiqizo unefomula emunca ngokushesha kakhulu. Ngakho-ke, umkhiqizo ulungele kakhulu izinsuku lapho isikhumba sidinga ukuba ngaphandle kakhulu noma kulabo abathanda ezemidlalo.
Izithako zalesi sikhilimu selanga esibanzi zifaka i-Avobenzone (5%), i-4-Methylbenzylidene Camphor (4%), i-Octocrylene (2%) ne-Bemotrizinol (1.5%), i-Butyl Methoxydibenzoylmethane 5%, i-silica.
Amaphuzu avelele we I-Cancer Council yokuvikela ilanga Lokhu ukumelana namanzi nomjuluko amahora angu-4 ngokuqhubekayo. Ngesikhathi esifanayo, ukuvikelwa kwesikhumba okuphelele ngobuchwepheshe bokuvikela ilanga obuningi. Ngaphezu kwalokho, lesi sikhuseli selanga sinokwakheka okuncane nokulula okumunca kalula esikhumbeni, futhi asidali imicu emhlophe. Ikakhulukazi, umkhiqizo unephunga elimnandi elimnandi kakhulu ukulisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 309,000 VND/ 35ml.
Ngokusebenzisa lesi sihloko esingenhla kumele ngabe ikusize ukuthi uqonde kangcono mayelana I-anti-spectrum sunscreen ebanzi Yiziphi izinzuzo eziletha esikhumbeni sakho uma usetshenziswa. Ngesikhathi esifanayo, ngeziphakamiso ze-sunscreens eziphezulu ezi-6 ezihamba phambili ezibanzi zesikhumba namuhla, okungenhla kuzokusiza ukhethe umkhiqizo ofanele wesikhumba sakho.
Xem Thêm Top 8 sữa dành cho người ung thư phổi phục hồi sức khỏe tốt nhất | Muasalebang
Top các mẫu khẩu trang đẹp độc cho nam và nữ mới nhất 2022 | Muasalebang